Emphysema - kuyini? Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa Izindlela
Emphysema ngokuthi isifo esingelapheki kuhambisana ushintsho izakhiwo kanye izakhiwo alveolar. isifo okunjalo kuyingozi kakhulu. Kungani kukhona emphysema, kuyini futhi yiziphi izimpawu zawo eziyinhloko? Yini zokwelapha ezisetshenziswa kwezokwelapha zanamuhla? Ingabe ligweme izinkinga ezingase zivele? Le mibuzo ehambisana kakhulu.
Emphysema: kuyini futhi yiziphi izimbangela zalo?
Njengoba kushiwo, lesi sifo lihlotshaniswa ushintsho isakhiwo se-alveoli, kubenze pererastyagivayutsya futhi ulahlekelwe ikhono lazo ukwenza inkontileka. Ngempela, lena iyingozi kakhulu isifo yamaphaphu. Emphysema eba kancane kancane kungabonakali, kodwa iholela endaweni efanayo - ukuthuthukiswa nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula.
Ngokuqondene izimbangela yalezi kwezinso, zingaba ihluke kakhulu. Ngokuyinhloko-ke Kuyaphawuleka ukuthi emphysema ngokujayelekileko uba yini umphumela ezinye izifo, njengesifo sofuba, isifuba somoya kanye ukucinana kwemithambo yomoya emaphashini. Ngakolunye uhlangothi, uhlushwa isifo, ababhemayo yogwayi kancane kancane ubhubhisa isakhiwo se-alveoli.
engcupheni akunakubangelwa izici ezithile ubuchwepheshe. Ikakhulukazi, emphysema ngokuvamile atholakala abasebenzi zokukhiqiza, abakhi, repairmen njll Permanent ukuhogela intuthu, uthuli ukwakhiwa kanye usimende, izinto amakhemikhali nolaka - .. Konke lokhu kugcina kubangele ukubhujiswa wamaphaphu izicubu. Okwamanje, uhlu izizathu sifo embuzweni bese zihlanganisa imvelo okungekuhle.
Emphysema: kuyini futhi yiziphi izimpawu zaso?
Welulekela we-alveoli, ukulahlekelwa kuyaqina kanye contractility ka phambili kuya ukungasebenzi umgudu wokuphefumula. Ngakho-ke, izimpawu zokuqala emphysema kuyinto iphika. Iziguli esekhala a yokuntuleka emoyeni futhi kokuziklinya isasasa. Futhi uma ekuqaleni livela kuphela iphika ngesikhathi umsebenzi, izinkinga bese ekugcineni ukuphefumula umngane komkhuba ogulayo. Ngokuvamile sengidonsa umoya bese exhaling ephelezelwa kwesifuba.
With ukuthuthukiswa sifo kuyagcinwa ngisho izinguquko zomzimba womuntu, ikakhulu esifubeni iba emgqonyeni emise, futhi iminwe uqweqwe ngohlobo of sigubhu izinti.
Ngenxa yokushodelwa umoya eba ukukhathala okungamahlalakhona - Iziguli ezingamadoda esekhala ukozela, ukukhathala, kwehle ukusebenza. Omunye uphawu lesi sifo kubhekwa futhi kungazelelwe kwesisindo.
Emphysema: kuyini kanti ziphathwe kanjani?
Njengoba sekuphawuliwe, isifo kungaholela eziyingozi. Yingakho ukuphathwa kuleli cala kuyadingeka. Yiqiniso, okokuqala kubalulekile ukunquma ukuthi yini eyabangela ushintsho wamaphaphu izicubu imbangela futhi impande. Ngokwesibonelo, kufanele ababhemayo ishiywe ngokushesha ngangokunokwenzeka kusukela imikhuba elimazayo, futhi izisebenzi ezichayeka eziyingozi, kubalulekile ukuqapha ngokucophelela ukuvikelwa, sebenzisa buso zokuphefumula namanye amadivayisi.
ukwelashwa izidakamizwa kuyehla ukuthola amalungiselelo aqede bronchospasm. A nomphumela omuhle zokwelapha kuyinto acupressure. Breathing izivivinyo nge-emphysema kudambisa izimpawu eziyinhloko futhi ugweme izinguquko amanye ama-alveoli. yokwelapha Oxygen kubhekwa ngempumelelo futhi lapho isiguli inhales emoyeni yanjalo evamile, bese umoya ngemadlana encishisiwe ye-gas.
Kuyaphawuleka ukuthi lapho akhethwa kahle ukwelashwa, abantu abaningi ukuphila okuvamile kakhulu.
Kanjani futhi yini ukuba aphathe umbandamu ezinganeni?
Broken emhlathini: izimpawu kanye nokwelashwa.
Wedding sigqoka ne emuva evulekile
Share Kuyisibopho sefa
Amaphakheji imikhiqizo eqandisiwe: izithelo ezikhiwe nemifino ngengqondo
I-RS-485 (i-interface-converter): umdwebo wokuxhumanisa nencazelo
Abbott Laboratories - Flagship embonini yezokwelapha
Volokolamsk - izindawo ongazibona
Kuyini CAD? umklamo ikhompyutha abasizwa: ngezigaba, ngokoqobo
I zokudlela ezinhle Kiev. TOP 5